शिवरात्रीको रंगमा राजेश हमाल देखि प्रमोद खरेलसम्म « Ramailo छ
शिवरात्रीको रंगमा राजेश हमाल देखि प्रमोद खरेलसम्म
प्रकाशित मिति : Mar 4, 2019
नेपालमा महाशिवरात्री विशेष रुपमा मनाइन्छ । पशुपतिनाथमा बिहानै देखि श्रद्धालु भक्तजनको भिड लागि रहेको छ । सर्वसाधरणले जुन उत्साहले शिवरात्री मनाउँदै छन् । कलाकारलाई पनि शिवरात्रीले छोएको छ ।
नेपालका कलाकारहरुले फेसबुकमा शिवजीको फोटो पोस्ट गर्दै हरहर महादेवको नारा लगाएका छन् । सामाजिक सञ्जाल आज भक्तिमय भएको छ । महानायक राजेश हमालले आफैलाई शिवको रुपमा प्रस्तुत गरेका छन् । हमालले उनकै अनुहारमा बनेको ट्रोल सेयर गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा दीपक राज गिरीको शिवप्रति भक्तिभाव प्रकट भएको छ । उनले लेखेका छन, ‘पिडाहरूलाई कालकुट विष झै पिउन सिकाइदेऊ दुश्मनलाई सर्पझै बसमा राखि जिउन सिकादेउ ! हरहर महादेव !’
हास्यकलाकार निर्मल शर्माले फिल्मकर्मीप्रति व्यग्य गर्दै लेखेका छन, ‘नाम दाम दुवै टन्नै हुन्छ भनेकै भरमा हाम फालेर हाल सजाय भोगिरहेका एक सक्कली सौखीन चलचित्र निर्माता ! आउँदै गरेका अनि तयार हुँदै गरेका अन्य सदस्यहरुलाई पनि क्लबमा स्वागत छ है शुभदिन महाशिवरात्री ।’
यसै गरी गायक प्रमोद खरेलले पनि शिवको अगाडी आफ्नो फोटो पोस्ट गर्दै लेखेका छन, ‘जय भोले, जय शम्भो… शिवरात्रीको पावन अवसरमा सम्पुर्णलाई हार्दिक हार्दिक शुभकामना ।’